पुरुषले लिं*गको तस्वीर पठाएपछि महिलाले यस्तो जवाफ दिइन्…. देखेर सबैकाे हाेस उ*ड्याे – ताजा समाचार
पुरुषले लिं*गको तस्वीर पठाएपछि महिलाले यस्तो जवाफ दिइन्…. देखेर सबैकाे हाेस उ*ड्याे
एउटी महिलालाई अपरिचित पुरुषले आफ्नो लिं*गको तस्वीर पठाए । महिलाले यस्तो जवाफ दिइन् कि त्यो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बन्यो ।
मानिसहरुले यी महिलाको बहादुरी र मुखभरीको जवाफ दिएकोमा स्याबासी दिइरहेका छन् । बेलायतकी समान्ताले म्यानचेस्टरमा एउटा रेष्टुराँका रिभ्यु फेसबुक फोस्ट गरिन्, जसपछि एक जना अनजान पुरुषले कमेन्ट गरे–आफ्नो इनबक्स चेक गर ।
जसै समान्ताले इनबक्स चेक गरिन् तब त्यहाँ आफूलाई जेम्स बताउने व्यक्तिले आफ्नो लिं*गको तस्वीर समान्तालाई पठाएका थिए ।
समान्ताले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनिन्–पहिला त मैले सोचेँ कि यस्तो हर*कत गर्नेलाई नजरअ*न्दाज गरुँ, जस्तो कि हामी महिलालाई सबै सिकाइने गर्दछ । तर फेरि मैले सोचेँ कि यिनको सामना गर्नैपर्छ र मैले उक्त व्यक्तिको ह*र्कत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेँ ।
समान्ताले उक्त व्यक्तिलाई जवाफमा लिं*गकोका कयौ प्रकारका तस्वीर पठाउन सुरु गरिन् । जसमा कयौ रंगिन र लिं*गकोको कार्टुनसमेत थियो ।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै समान्ताले भनिन्–म सबै युवालाई बताउन चाहन्छु कि हरेक युवती यस्तो हर्कत चुपचाप सहदैनन् । तपाईलाई अर्कोपटक सार्वजनिक रुपमा बेइज्जत गरिनेछ ।
समान्ताले यो पूरा घटना फेसबुकमा पोष्ट गरिन् जसलाई धेरैले शेयर गरेका छन् । एजेन्सी